Ukuthumela iifayile ezinkulu: sesiphi esona sixhobo sasimahla simahla? | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Ukuthumela iifayile ezinkulu: sesiphi esona sixhobo sasimahla simahla?
Khawube nomfanekiso-ngqondweni wale meko. Ugqibile iprojekthi yomthengi. Kuya kufuneka umthumele i-imeyile ngazo zonke izinto ozisebenzileyo kunye nomgangatho ophezulu. Ke sowuzokuvula i-imeyile ukuze uyithumele kuye, andithi? Sukuba nexhala, kuqheleke kakhulu kunokuba ucinga. Ukuthumela iifayile ezinkulu ngeendlela eziqhelekileyo akunakwenzeka, kodwa ngethamsanqa zikho ezinye izixhobo ezinokukunceda ufumane into oyifunayo kumamkeli wakho.
Emva koko siza kuthetha nawe malunga Ungazithumela njani iifayile ezinkulu, zeziphi izixhobo onazo ezikhoyo, simahla, ukuyenza, kunye nendlela yokwenza nokuba ungahamba ngeselfowuni. Masiyenze?
1 Thumela iifayile ezinkulu, kutheni ungathumeli ngeposi?
1.4 I-Firefox Thumela
Thumela iifayile ezinkulu, kutheni ungathumeli ngeposi?
Into eqhelekileyo, xa ufuna ukuthumela ifayile, nokuba yi-pdf, umfanekiso, njl. kukusebenzisa i-imeyile. Kodwa ezi zinomda kubungakanani bezincamathiselo, kwaye ngelixa zikuvumela ukuba usebenzise ukugcinwa kwelifu, ngamanye amaxesha akonelanga kwinto ofuna ukuyithumela. Ngesi sizathu, izixhobo ezininzi zaphuma zinceda ukuthumela iifayile ezinkulu ngaphandle kokusebenzisa imeyile, uninzi lwazo zikunika nje ikhonkco elilula ukuba ulithumele, nokuba kungeposi, i-WhatsApp, iTelegram ...
Kodwa, Zeziphi ezona zixhobo zibalaseleyo phaya? Sikuxelela.
Ngaphandle kwamathandabuzo, i-WeTransfer sisixhobo esaziwa kwihlabathi liphela. Ikuvumela ukuba uthumele ukuya kuthi ga kwi-2GB nakubamkeli abahlukeneyo aba-10 ngaxeshanye, okuninzi kakhulu. Ekuphela kwento ekulinganisela kuwe bubungakanani bento ekufuneka uyithumele; Oko kukuthi, uya kuba nakho ukunamathisela zonke iifayile ozifunayo, kodwa xa zizonke, ezi akufuneki zigqithe kubungakanani be-2GB.
Ngexesha lokuyithumela, ikunika iindlela ezimbini: ukuba isixhobo ngokwaso siphethe ukuthumela i-imeyile kumntu ekufuneka eyifumene nekhonkco ukuze ayikhuphele; okanye ikunika ikhonkco lokukhuphela ukuze ukwazi ukukopa kwaye uyithumele ngamajelo owafunayo.
Into elungileyo ngesixhobo kukuba Akukho mfuneko yokuba ubhalise, kwaye awuthinteli ukuziswa (umzekelo, ukuthunyelwa kube kanye kuphela iiyure ezingama-x okanye iintsuku), kodwa into embi kukuba ukusikelwa umda nge-2GB, nangona oko kunokubonelelwa ngohlobo oluhlawulelweyo, olukuvumela ukuba uthumele ukuya kuma-20 GB kwaye une-1TB yokugcina ekhoyo .
Oku kuninzi ayaziwa ngumntu wonke, kodwa intle intle into ayenzayo. Kwabaqalayo, ikuvumela ukuba uthumele iifayile ezinkulu ngaphandle kwemida. Ngoku, ukuyenza, uneendlela ezimbini. Ukuba ingaphantsi kwe-10GB, ke into eyenzayo ukuyigcina efini, ukuze nabani na angayikhuphela. Kodwa ukuba inkulu kunaleyo ye-10GB, iya kwabelwana ngayo njengenkqubo yeP2P. Oko kukuthi, ngokungathi ukhuphele umsinga.
Ekuphela kwento embi esiyibonayo kule nkqubo, kwaye inokuba sesona sizathu sokuba ungafuni ukuyisebenzisa, kukuba kufuneka ufake usetyenziso kwikhompyuter yakho, into abaninzi abakhetha ukuyiphepha ngazo zonke iindleko. Kodwa ukuba awukhathali ngale nto, ngokuqinisekileyo ungayisebenzisa ngaphandle kwengxaki.
Esi sixhobo sesinye esaziwa ngcono xa kufikwa ekuthumeleni iifayile ezinkulu. Into emnandi ngayo kukuba ungathumela ifayile, ngaphandle komda wobungakanani, kumamkeli omnye. Kwaye iya kufumaneka kuphela kwiintsuku ezi-3. Ngoku, inendawo engalunganga kwaye yiyo loo nto, nangona Kusimahla, kunengxaki yokuba kufuneka ubhalise ukuze uyisebenzise.
Ngaba uyazi ukuba isikhangeli seMozilla Firefox siyakwazi ukuthumela iifayile ezinkulu. Sukuba nexhala, nathi asikhathazeki. Kungenxa yoko le nto siyicebisayo. Esi sixhobo sikuvumela ukuba uthumele iifayile ezifikelela kwi-1GB ukuba awubhalisi, ukuya kuthi ga kwi-2,5GB ukuba wenzayo, ngekhonkco izophelelwa lixesha x (ke uyazi ukuba iifayile zakho azizusoloko zihlala efini).
Eyona nto imbi kule meko kukusikelwa umda, kuba ukuba ifayile oyithumelayo inkulu, kuya kufuneka usebenzise abanye.
Kwaye xa uthetha ngezixhobo zemihla ngemihla, phantse wonke umntu sele enayo i-imeyile noGoogle kwiGmail. Kwaye oku kukuvumela ukuba ugcine isitoreji seGoogle Drayivu sasimahla se15GB Ke unokuthumela iifayile ezinkulu kuye nakubani na omfunayo ngesithintelo sendawo.
Ukuba into oyifunayo kukufaka iifayile ezinkulu kodwa awufuni kuhlawula nantoni na ukuyenza, ungathini malunga nokuzama esi sixhobo? Ikuvumela ukuba uncamathisele iifayile ukuya kuthi ga kwi-5GB ngohlobo lwasimahla. Nangona kunjalo, unokufikelela kwi-100GB kuleyo ihlawuliweyo.
Ukongeza, ikunika i-1TB yokugcina ilifu ngokusisigxina.
Ngaphambi kokuba i-WeTransfer yaziwe kwaye isetyenziswe kwihlabathi liphela, iMediaFire yayiyeyona yayikhethwa ukuba ikhethwe. Isixhobo esikunika ukuya kuthi ga kwi-10GB yokugcina ilifu, kwaye simahla! Ukongeza, iifayile zinokwabelwana ngazo nge-imeyile, amakhonkco, okanye kwimidiya yoluntu.
Ngaba ayikhaleli intsimbi? Yithathe lula, kuyinto eqhelekileyo. Kodwa besifuna ukukuxelela ngayo kuba sisixhobo esenziwe eSpain. Ikuvumela ukuba uyalele ukuya kuthi ga kwiifayile ezingama-50, ukuya kuthi ga kubungakanani be-5GB, kubantu abangama-20 ubuninzi ngexesha ngokuthumela i-imeyile (okanye ikunika ikhonkco ukuba uyithumele nakubani na ofuna).
Into elungileyo kukuba awunyanzelekanga ukuba ubhalise, kwaye amaxwebhu owafakayo aya kufumaneka kuphela kwiintsuku ezisi-7, emva koko ziya kucinywa.
Awufuni umda wobungakanani? Ewe, akukho nto, isixhobo seSmash sinokuba yile nto uyikhangelayo. Ayizukucela ukuba ubhalise ukuyisebenzisa, kunye neyakho iifayile ziya kufumaneka kuphela kangangeentsuku ezili-14. Ukuba ufuna bahlale ixesha elide, unokukhetha izicwangciso ezihlawulelweyo, apho baya kukunika khona iinkcukacha-manani zokukhutshelwa.
Ukuba ufuna thumela iifayile ezinobunzima obungama-50 GB, Esi sisisombululo sakho, kuba simahla. Bayakuhlala efini kangangeentsuku ezisixhenxe, emva koko banyamalale. Ukongeza, bakunika ngaphandle kokubhalisa ukuba wazi ukuba zingaphi izihlandlo ikhutshiwe ifayile okanye xa iza kuphela.
Ngoku, ingxaki ngesi sixhobo kukuba akukho encryption, oko kukuthi, iifayile zakho aziyi kukhuseleka ngaphandle kokuba uhlawule isicwangciso sokuhlawula.
Njengoko ubona, zininzi iindlela onokukhetha kuzo, ke ukuba kuya kufuneka uthumele iifayile ezinkulu, ungakhathazeki, zininzi iindlela zokwenza ukuze bafikelele kubamkeli okanye kubamkeli babo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Amaqhinga » Ukuthumela iifayile ezinkulu: sesiphi esona sixhobo sasimahla simahla?
Nguwuphi umthombo? Izixhobo ezi-3 zokuchonga iifonti ezikwi-intanethi